प्रकासित मिति : ८ आश्विन २०७५, सोमबार प्रकासित समय : ०८:४४
काठमाडौं असाेज ८। पार्टी निर्णयमा शीर्ष नेताकै असन्तुष्टि देखिनु नेकपामा नौलो कुरा हुन छाडेको छ। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको पार्टी एकता भएकै दिनदेखि वरियताको एजेन्डा उठाएको–उठायै छन्। प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टी पदबाट राजीनामा नै दिनुपर्ने अवस्था आयो। उनको राजीनामा स्वीकृत हुने प्रक्रियामै पुगेन।
अर्का वरिष्ठ नेता माधव नेपाल भन्दैछन्– पार्टीमा आफ्नो पक्षका नेतालाई अध्यक्ष ओलीकै कारण जिम्मेवारीमा भेदभाव गरिंदैछ। उनी विदेशमा रहेका बेला यता सचिवालय बैठकले प्रदेशका पदाधिकारी र इन्चार्जको जिम्मेवारी बाँडेको छ। यो निर्णय प्रक्रियामा उनको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको त छैन, तर उनी निकट नेताका असन्तुष्टि आउन थालेका छन्।
के नेकपाभित्र गुटबन्दी हाबी छ ? आइतबार बिहान नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठले हात्तिवनस्थित निवासमा पार्टीका युवा–विद्यार्थीका पदाधिकारीसँग त्यसको केही खुलासा गरे। नागरिक आन्दोलनका अगुवा देवेन्द्र्रराज पाण्डेले उनलाई सुनाएका अभिव्यक्तिको प्रसंग कोट्याउँदै उनले भने, ‘नेकपाभित्र गुटसम्म ठीकै थियो, तर गिरोह नै छ भनेर नागरिक अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डेले मलाई सुनाउनुभयो, यदि त्यस्तो गिरोह छ भने त्यसले पार्टीलाई कहाँ पुर्‍याउला ? युवा–विद्यार्थीले चिन्ता गर्नुपर्ने बेला आएको छ।’
तोकिएका मिति र समयमा बैठक नबस्ने, एकता प्रक्रियाको कामले तीव्रता नपाउने जस्ता कारणमा उनले मुखै खोलेर ‘गुटको कारण’ त भनेनन् तर यसप्रति उनी असन्तुष्ट छन् भन्ने संकेत भने दिए।
पार्टीभित्र विचारद्वारा निर्देशत राजनीति नभएको, रणनीति नबनेको, कार्यनीति मात्र रहेको, विचार नभएपछि गुट मात्रै देखिएको नेताहरूको भनाइ छ।‘राजनीति विचारबाट निर्देशित हुनुपर्ने मान्यतालाई नेपालका धेरैजसो पार्टीले छोड्दै गइरहेका छन्’, नेकपा नेता राम कार्कीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘दैनिक राजनीति मात्र चलिरहेको छ अहिले। जे आइपर्छ, त्यही गर्दै जाने अवस्थाको राजनीति, त्यसभित्र अनेक कुरा आउनु स्वाभाविक छ।
पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गुट सबैभन्दा बढी बलियो छ। उनको गुटका नेताका अरुका तुलनामा एकढिक्का छन्। महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी समिति सदस्यहरू सुवास नेम्वाङ, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञावाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, विष्णु रिमाल, केन्द्रीय सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, गोकुल बास्कोटा, भानुभक्त ढकाल, राजन भट्टराईलगायत नेताहरू ओली ‘क्याम्प’का सारथि छन्।
सात प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव गरी २८ पदाधिकारीमध्ये ओली पक्षका १० नेताले जिम्मेवारी पाएका छन्। यस हिसाबले पनि ओली पार्टीमा हाबी छन्। ओली समूहबाट तत्कालीन एमालेमा महासचिव जितेका ईश्वर पोखरेल भने पछिल्ला दिनमा उनीसँग असन्तुष्ट छन्। विष्णु पौडेललाई महासचिव बनाइएको र सरकारमा आफुले रोजेको मन्त्रालय नदिएकोमा उनी ओलीसँग सन्तुष्ट बन्न सकेका छैनन्। तर क्याम्पै छोडेर हिंडेका पनि छैनन्। उनी अहिले दोधारमा छन्।
ओलीपछि बलियो गुट छ, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को। तत्कालीन माओवादीका बहुमत नेताहरू उनीसँगै छन्। स्थायी समिति सदस्यहरू वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत, चक्रपाणि खनाल, अग्नि सापकोटा, हरिबोल गजुरेल, हितराज पाण्डेलगायत नेता दाहाल वरिपरि छन्। दाहालको गुटभित्र पनि वर्षमान र जर्नादनका उपगुट शक्तिशाली छन्।
तत्कालीन एमाले खेमाभित्र वरिष्ठ नेता माधव नेपालको अलग्गै गुट छ। पूर्वघटकभित्र बहुमत जिल्ला ९४७ जिल्ला अध्यक्ष० को नेतृत्व यो समूहको थियो। स्थायी समिति सदस्य भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, लालबाबु पण्डित, जगन्नाथ खतिवडा, राजेन्द्र राईलगायत नेताहरू नेपाल ‘क्याम्प’मा छन्।
ओलीको जस्तो यो गुट एकढिक्का देखिँदैन। प्रदेश कमिटीमा नेपाल पक्षका ३ नेताले इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका छन्। प्रदेशका अन्य पदीय जिम्मेवारीमा उनी पक्षीय नेता छैनन्। घनश्याम भुसाललगायतका नेताहरूले गुटबाटै बाहिरिएर अलग्गै समूहको अभ्यास गर्न खोजिरहेका छन्। भुसाल पार्टी एकताको प्रक्रियादेखि नै फरक देखिन खोजेका छन्। उनले एकताको आरम्भिक चरणमा ‘जबजको च्याप्टर क्लोज’ भएको भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए।
तात्कालीन माओवादीका राम कार्की लगायत नेतासँग मिलेर उनले कार्ल माक्र्स द्वीशतवार्षिक समारोहअन्तर्गत वैचारिक अभियानको नेतृत्व गरिरहेका छन्। उनी छुट्टै वैचारिक राजनीतिक समूह निर्माणमा क्रियाशील छन्। सरकारी सुविधाका पद र पार्टी एकतामा संरक्षण नगरेको भन्दै भुसाललगायत नेताहरू नेपालसँग असन्तुष्ट छन।आजको अन्नपूर्णपोष्टबाट।